Xakamee Warshadda Madax, Soo-saareyaasha - Soosaarayaasha Soo-Saaraha Qalabka Shiinaha
Taxanaha ZHD (Korantada ama Neefta) Walxaha Xakamaynta Qulqulka Ugu Yar
Profile ZHD qalab kala soocid qafisyo kala duwan ayaa loo isticmaalay qafis isku dhejisan shaashad iskudhaf ah. Waxay dhammeystireysaa xakamaynta xawaaraha dhexdhexaadka ah, iyo qaylada si weyn u dhimaysa oo ay sameyso gaaska cadaadiska sare leh ama uumiga ku dhex jira waalka, cadaadiska isku dhafka ah ee yareynta yareynta yareynta waxtarka ka hortagga qulqulka dareeraha, sidaas darteed waa waalka xakamaynta xasilloon ee loo isticmaalo waxqabadka dhexdhexaadka ah ee cadaadiska sarreeya, macaamiisha ayaa sidoo kale dooran kara waxyaabo badan farsamada disphragm-ka ama firfircoonida neefta, iwm T ...
Taxane ZDM Automatic xakamaynta waalka
Profile ZDM taxanaha Qalabka dib u habeynta otomaatiga ah waa nooc ka mid ah qalabka ilaalinta bamka. Waxay si otomaatig ah u ilaalisaa mashiinka 'centrifugal pump' marka bamka jirka uu ku dhaco waxyeelo daloosha oo aan degganeyn (gaar ahaan gaarsiinta biyaha kulul hawlgalka culeyska yar). Marka socodka bamka uu ka hooseeyo socodka horay loo sii dejiyay, isweydaarsiga ayaa gebi ahaanba furi kara si loo hubiyo bamka socodka ugu yar ee loo baahan yahay. Xitaa socodka si buuxda u xiran, oo ah socodka socodka waa eber, socodka ugu yar ayaa sidoo kale mari kara marin loogu talagalay dib-u-xisaabinta otomaatiga ah. Cadaadis r ...
Taxanaha ZDL Nidaamka xakamaynta dib u habeynta otomaatiga ah
Profile ZDL taxanaha Auromatic reirculation waalka waa nooc ka mid ah qalabka prtectiong pump. Waxay si otomaatig ah u ilaalisaa mashiinka centrifugal-ka marka bamka mashiinka uu ku dhaco waxyeelo dalool ama xasillooni la'aan (gaar ahaan gaarsiinta biyaha kulul howlgalada culeyska yar). Marka socodka bamka uu ka hooseeyo socodka horay loo sii dejiyay, isweydaarsiga ayaa gebi ahaanba furi kara si loo hubiyo bamka socodka ugu yar ee loo baahan yahay. Xitaa socodka si buuxda u xiran, oo ah socodka socodka waa eber, socodka ugu yar ayaa sidoo kale mari kara marin loogu talagalay dib-u-xisaabinta otomaatiga ah. Cadaadis ...
ZDT Model Automatic xakamaynta waalka xakamaynta
Profile ZDT taxanaha Qalabka dib-u-cusbooneysiinta otomaatigga ah waa nooc ka mid ah qalabka ilaalinta bamka. Waxay si otomaatig ah u ilaalisaa bamka bartamaha marka bamka mashiinka uu ku dhaco dhaawac soo gaara ama aan xasillooneyn (gaar ahaan gaarsiinta biyaha kulul howlgalada culeyska yar). Marka socodka bamka uu ka hooseeyo socodka horay loo sii dejiyay, isweydaarsiga ayaa gebi ahaanba furi kara si loo hubiyo bamka socodka ugu yar ee loo baahan yahay. Xitaa socda si buuxda u xiran, oo ah socodka ugu muhiimsan waa eber, socodka ugu yar ayaa sidoo kale ka bixi kara marinka. Taxanaha ZDT wuxuu leeyahay marin weyn, ...
Halbeegyada Farsamada Magaca Ballaca Magaca '/ 3/4 "~ 6" Cadaadiska Magac leh ： ANSI 150LB-4500LB Nooca jirka oo si toos ah loo marayo, nooca xagal heerkulka hawlgalka 150 ℃ -450 ℃ Astaamaha socodka qulqulka boqolkiiba isle'eg, Jaangooyaha toosan ee korantada ama fuuq-baxa hawo-baxa ayaa la kulmaya ANSI B16. Baxsiga 104 V (heerka heerka VI ayaa la heli karaa) Astaamaha Valve 1) Aragtida wareejinta wareegga wareegga, qaab dhismeedka yareynta cadaadiska heerarka badan. 2) Waxtarka tamarta, ...
Feature Wareejinta wareegga dhiigga, habka yareynta cadaadiska heerarka badan, iska ilaali cavitation-ka si hufan, u dheeree nolosha. Dhammaan gogosha si dhakhso ah ayaa looga saari karaa loona beddeli karaa, way fududahay in la ilaaliyo iyada oo kharash yar. Xirmooyinka xirmooyinka tayo sare leh ee la soo dhoofiyo waxay xaqiijinayaan in dheecaanku ka madhnaado iyadoo aan badelkiisa badnayn. Dhismaha sayniska, qalabka waxqabadka sare iyo shaqo wanaaggu waxay u suurta gelinayaan bareesada iyo qafiska inay yeeshaan waxqabad ka hortag ah iyo ka-hortag suuxdin si ay amo yar ...
Halbeegyada Waxqabadka Halbeegga Magacyada 3/4 "~ 4" Cadaadiska Magaca ee ANSI 150LB-4500LB Nooca jirka Y qaabka 45-darajo xagal jirka Waxyaabaha A105, F22, F91, F92, F316H Bonnet istaandarka, Qaab dhismeedka qaboojinta Isku-xidhka kursiga xididka ah Astaamaha silig ahaanta leh ee qulqulka qulqulka socodka si dhakhso ah Laba nooc oo firfircooniyayaal ah ayaa kala ah dookhragm pneumatic oo ikhtiyaar ah (pneumatic-guga badan iyo kiciyaha hal-guga hal-guure ayaa ikhtiyaar ah ...
JY Series Globe Madax
Faahfaahin Dhexroor Magaceed 3/4 "~ 4" Cadaadis Magac leh ANSI 150LB-4500LB Waxyaabaha jirka A105, F22, F316H, F91, F92 Qulqulka sifooyinka Furaha dhaqsaha furitaanka 1) Nidaamka xirxirida ee aadka u wanaagsan Adeegsiga xirxirida heerkulka sare ee Garlock waxay hubisaa xiritaanka iyo saliidaynta ugu fiican. waxqabadka iyo sidoo kale hawlgal fudud oo xaalad badbaado leh leh. 2) Qalabka isku-dhafan ee adag ee ku saleysan 'cobalt-based' Qalabka dusha sare ee dusha sare ayaa ka soo baxaya carbide ama isku-dhafka adag ee carbide, oo leh ...
Faahfaahinta baaxadda cabbirka DN25 ~ DN400 Heerka kala-saaridda Cadaadiska 150Ib, 300Ib, 600Ib Qalabka jirka walxo kala duwan oo la heli karo, sida WCB, WC6, WC9, CF8M, CF8, CF3M, CF3, iwm. Fursada Furitaanka Dhaqdhaqaaqa Degdegga ah, toosan ama boqolkiiba le'eg Faa'iidooyinka 1) Valve Plug Stability Rinjika silsiladda hagaha waxay bixisaa xasillooni fur wanaagsan, oo yareyneysa gariirka iyo sawaxanka farsamada; 2) Awood Dheeraad ah Kanaalka qulqulka qulquli wuxuu hubiyaa iska caabbinta socodka hooseeya iyo kabax ...